Michelle MacLaren, Elisabeth Moss iyo Daina Reid si ay u jiheeyaan dhamaan 8da qaybood ee taxanaha Gabdhaha ifaya ee Apple TV + | Waxaan ka socdaa mac
Mid ka mid ah mashaariicda ay Apple ka shaqeyneysay muddo ku dhow hal sano ayaa ah Gabdhaha ifka u ifaya, oo ah taxane ay jilayaan Elishabeth Moss sida aan ku soo tabinnay bishii July ee sanadkii hore. Bilihii la soo dhaafay, jilayaasha taxanaha ayaa sii ballaaranayay iyadoo lagu daray Wagner Moura iyo Jamie Bell.
Si kastaba ha noqotee, wali ma aanan garanaynin cidda ama cidda noqon doonta dadka mas'uulka ka ah jihada filimkan xiisaha leh. Macluumaadkan waxaa daabacay Variety. Sida laga soo xigtay warbaahintani, Apple ayaa ugu dambayntii heshay cidda mas'uulka ka noqon doonta hagida xilligan koowaad oo ka kooban 8 qaybood: Michelle MacLaren, Elisabeth Moss iyo Diana Reid.
Michlee MacLaren (Breaking Bad) waxay leedahay awood Emmy waxayna jiheysaa qaybaha 2-aad ee ugu horeeya. Elisabeth Moss waxay leedahay Abaalmarinta Emmy iyo Abaalmarinta Guild ee Awooddeeda, waxay hagi doontaa qeybta seddexaad iyo afaraad halka Diana Reid (Sheeko gacmeedka) loo magacaabay Emmy, waxay hogaamin doontaa 4-tii dhacdo ee ugu dambeysay taxanahan. Elisabeth Moss, marka lagu daro jilitaanka taxanaha iyo jihada laba qaybood, waxay sidoo kale u adeegtaa soo saare fulineed.
Gabadha dhalaalaysa waxay ku saleysan tahay isla magaca ay qortay Lauren Beukes, oo iyaduna u adeegta wax soo saar fulineed oo ay weheliso Elisabeth Moss. Riwaayaddan waxaa la daabacay 2013 waxayna daba socotaa sheekada Kyrby (Elisabeth Moss) oo, ka dib markii ay ka badbaaday weerar arxan darro ah, ay mas'uul ka tahay cayrsashadiisa iyada oo ay ogaatay in xaqiiqda ku hareeraysan ay tahay mid aan degganayn, is beddelay.
Wagner Moura (Narcos) wuxuu jilaa dabeecad la yiraahdo Dan, oo ah suxufiyad ruug cadaa ah oo raacda sheekada ku saabsan koobiyeynta weerarada dabacsan. Jamie Bell wuxuu ciyaari doonaa doorka Harper, oo lagu sifeeyay inuu yahay kelinimo qarsoodi ah oo si uun ugu xiran Kirby.
Xilligan la joogo ma jiro taariikh loo qorsheeyay inay soo bandhigto, laakiin sida laga soo xigtay Noocyada kala duwan, waxay u badan tahay inuu ku yimaado Apple TV + kahor dhammaadka sanadkan, uguyaraan qeybta koowaad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple TV » Michelle MacLaren, Elisabeth Moss iyo Daina Reid si ay u jiheeyaan dhamaan 8da dhacdo ee Gabdhaha ifaya ee Apple TV +
macOS Big Sur 11.4 wuxuu xannibayaa dayacanka weyn